मेरो शेयरमा बेलाबेला समस्या किन आउँछ ? | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal मेरो शेयरमा बेलाबेला समस्या किन आउँछ ? | एक्सप्रेस | GNN Nepal
मेरो शेयरमा बेलाबेला समस्या किन आउँछ ?
असार ३० गते, २०७८ ११:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । मेरो शेयरमा बेलाबेला समस्या आउने गरेको छ । विशेषगरी कुनै कम्पनीको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) खुलेको समयमा मेरो शेयरमा समस्या आउने गर्छ । समयमा एप नै नखुल्ने, लग इन गर्दा इरर देखाउने, लग इन भएपनि आइपिओ भर्न समस्या हुने गरेको छ । यस्ता समस्याहरुबाट हजारौं लगानीकर्ताहरु पीडित भइरहेका छन् ।
यी समस्याहरुका सन्दर्भमा हामीले सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका आइटी प्रमुख सुरेश न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका थियौं । उनले हाल यी समस्याहरु समाधान भइसकेको बताएका छन् । पहिले यस्ता समस्याहरु आउने गरेको भएपनि हाल ती समस्याहरु नरहेको उनले बताए । यद्यपि उनले सर्भरका कारण यस्तो समस्या आउने गरेको भने स्वीकार गरे ।
‘कुनै बेला सर्भरमा नयाँनयाँ फिचरहरु थप्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि हामीले केही नयाँ फिचरहरु थपिरहेका छौं । त्यस्तो बेला सर्भर डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला मेरो शेयर खोल्दा नखुल्ने समस्या हुन्छ । अब यो समाधान भइसक्यो । समस्या आउँदैन ।’ उनले भने ।
नियमित गस्तीमा गएका असई र जवान वेपत्ता, एकजनाको शव खोलामा भेटियो
चीनको गरिबी नियन्त्रण अभियान : पाँच करोडभन्दा बढी गरीबीबाट मुक्त
बिहीबार काठमाडौं उपत्यकामा ७५५ संक्रमित थपिए